गणतन्त्रका १० वर्ष, स्मारक अन्तिम चरणमा, स्तम्भ अझै अन्योलमा (भिडियोसहित) - TV Annapurna
May 28, 2018 May 30, 2018 Annapurna TV
राणा शासनको अन्त्यदेखि हालसम्म नेपालमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनका लागि धेरैले आफ्नो ज्यानको आहुती दिएका छन् ।उक्त परिवर्तन ल्याउन भएका आन्दोलनका क्रममा हजारौँ मानिस हराए, कयौँ बेपत्ता भए र पारिए र अङ्गभङ्गसमेत भए । उनीहरुको नाममा सम्झनास्वरुप ७ वर्ष अघि निर्माण थालिएको गणतन्त्र स्मारकको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने स्तम्भको निर्माण कार्यबारे अझै अन्योल कायम छ । नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको पनि १० वर्ष पुरा भएको छ । तर पनि गणतन्त्र स्मारक निर्माणका काम अन्तिम चरणमा भएपनि स्तम्भ निर्माणबारे अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सो स्मारक निर्माण गरेको हो । स्मारक सञ्चालन कसले कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कार्य्विधि मस्यौदा भइरहेको विभागका उपमहानिर्देशक मणिराम गेलालले बताए ।
३५ रोपनी जग्गामा फैलिएको गणतन्त्र स्मारकको काम सकिएपनि त्यसको भित्री डेकुरेशनको काम बाकी रहेको उनले बताए । नारायणहिटि दरबारको जग्गामा बन्न लागेको स्मारकको २०६८ साल चैतमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शिलान्यास गरेका थिए । यसै विषयमा सहरी विकास तथा निमार्ण विभागका उपमहानिर्देशक मणीराम गेलाल सँग नबराज श्रेष्ठले कुराकानी गरेका छन् ।
स्मारक स्थापना भयो यसले खासमा के महत्त्व राख्छ ?
स्मारकले विभिन्न आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता परेका ,पारिएका, अंगभंग भएका र हराएकाहरूको सम्झनामा यस स्मारक निमार्ण गरिएको हो । यो स्मारकमा चार वटा पिलर निर्माण गरिएको छ । निमार्ण भएका पिलरहरुले द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको झल्को दिने हुनाले यसको संरचना यस्तो खालको निमार्ण गरिएको हो । स्मारक बनाउनको मुख्य उद्देश्य भनेको नै नेपालको लागि बलिदान दिने नेपालीको सम्झनाका लागि हो । स्मारक पनि हामीले नेपालको नक्सा सहित उज्यालो बलिरहने गरी बनाएका छौ नि नेपालको नक्सा रहेकाले त्यहाँ सहितको सम्झनामा उज्यालो बालिने गरी निमार्ण गरिएको छ ।
नेपालको राजतन्त्रको इतिहास बोकेको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरको पूर्वतिर निमार्ण भएको यो स्मारकमा गणतन्त्र प्राप्तिका क्रममा भएका घटना दर्साउने तस्बिर राखिने योजना छ पनि छ । यसका लागि छिटै काम हुन्छ ।
स्मारकको संरचना कस्तो किसिमको छ ?
स्मारकको संरचना अपांगमैत्रीका साथै भित्रको ग्यालरी र बहुउद्देश्यीय हल बाहिर फुलबारी सहितको भएको छ । स्मारकमा नेपालको ‘झन्डा, नेपालको नक्सा, पिलर र सबै संरचनामाथि रंगीन प्रकाशको व्यवस्था भएकाले रातको समयमा स्मारक अझ झकिझकाउ हुने अपेक्षा छ । निमार्ण गरिएको स्तम्भमा ‘डेढ मिटर लम्बाइ र ६० सेन्टिमिटर चौडाइका ४ पिलर रहेका छन् ।
यो स्मारक बन्दै गर्दा यसको लागत चाही कति लाग्यो नि ?
स्मारकको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । पहिले ३५ करोड भने पनि बिचमा विभिन्न कारणले यसको खर्च बढेको हो । अहिले सम्म ४२ करोड यसको लागत अनुमान गरिएको छ । यसको निमार्ण सकिएपछि हिसाब कति लाग्यो भन्ने एकीन हुन्छ ।
हस्तान्तरण चाहिँ कहिले नि ?
अहिले सम्म यसको सबै काम सकिएको छैन । हस्तान्तरण गर्ने तयारी पनि छैनन् अब केही समय पछि यसको फिन्सीङको काम सके पछि हामीले सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा गछौँ ।गणतन्त्र दिवसका क्रममा कुनै पनि कार्यक्रमको तयारी छैन् ।
शुल्क तिरेर सर्वसाधारण जान पाउँछन् कि निःशुल्क ?
यो स्मारक सबैका लागि निमार्ण गरिएको हो । हामी अहिले सम्म स्मारक प्रवेश गर्नेका लागि शुल्क नलाग्ने गरी कार्यविधि निमार्ण गरिहरेका छौ । कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि कार्यान्वयमा जान्छ । त्यसै अनुरूप हामीले कार्यविधि बनाउँदै छौँ । यो स्मारक भित्र भ्रमण र अध्ययनका लागि आउने सर्वसाधारण, विद्यार्थीका साथै विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्तिको चित्र र सङ्घर्षलाई भावनात्मकरुपमा देखाउने एवं बुझाउने स्मारकको मूल लक्ष्य हो । त्यस कारण यो कसैकालागि बन्द ने हुँदैन। सधैँ खुल्ला रहनेछ ।
लोपोन्मुख सालकको खपटासहित दुई पक्राउ
बार्सिलोना बन्यो युरोपको सर्वोत्कृष्ट क्लब